Archive du 13-déc-2021
Fiainam-pirenena Miomana hiverina eo amin’ny fitondrana ny HVM
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny fameloma-maso na “Redynamisation” ny Antoko HVM, ka taorian’ny faritra maro, dia teto Antananarivo indray no nanaovana izany ny sabotsy 11 desambra teo teny amin’ny foibeny eny Andraharo.
Mitohy ny fahasahiranana. Izay raha atao bango tokana izany ny lojikan’ny zava-misy amin’ity herinandro ity satria na dia ny fikasana haneho tamin’ny mpitondra fanjakana sy ny mpanapa-kevitra ny fisian’izany
Fanjarian-tsakafo sy fambolena any Atsimo Nanolotra 25 tapitrisa dolara ny Amerikana
Nambaran’ny mpiandraiki-draharahan’ny masoivohon’i Etazonia Amy Hyatt ny faran’ny herinandro teo ny fanomezana famatsiam-bola 25 tapitrisa dolara fanampiny,
Orange pro league, andro faharoa Tsara fiditra ny Zanak’ala
Na dia moka fohy, 0 noho 1, aza no nandresen’ny Zanak’ala FC ny Dato FC tao an-jaridainany ny sabotsy teo dia azo lazaina ho tsara fiditra ihany izy ireo nahazo izany tao Farafangana ho an’ity sokajy B
GASY MI sy ny antoko PDS Ny fanjakana isam-paritra ihany no vahaolana
Eo anatrehan’ny fahantrana lalipaka mahazo ny firenena amin’izao ka tafiditra ao anatin’ny firenena 10 mahantra indrindra eran-tany i Madagasikara,
Toliara Norarafana lakrimozenina ny vahoaka
Miakatra hatrany anaty zanaka atidohan’ny Fanjakana Rajoelina ny tahotra sy ny hetraketraka politika, hany ka hatramin’ny fankalazana ny tsingerin-taonan’i Marc Ravalomanana tao amin’ny Magro Toliara
Mpivarotra kojakojan-tokantrano Maro ireo manome tolotra ankatoky ny fety
Rehefa volana desambra toy izao dia anisan' ireo manavao ny tolotra omeny ny mpanjifa ny Tranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary ao Bazar be Toamasina.
Hanitriniala Raholdina sy ny FAFI V Nanome fanampiana zokiolona miisa 500
Mitohy hatrany ny asa sosialy fanaon’ny Fikambanana Fanantenana FAFI V sy ny filohany Hanitriniala Raholdina, indrindra, amin’izao ankatoky ny noely sy taom-baovao izao, hoy ny fampitam-baovao.
Miarinarivo Hazo tsy ara-dalàna 2055 isa no tratra
Ramy, Nato, Sohihy, Vitanina, Rotsa, Varongy. Ireo no karazan-kazo saron’ny Tobim-paritry ny Zandarimariampirenena tao Miarinarivo ny alin’ny talata 7 desambra teo raha hizotra hihazo an’Antananarivo.
Hery Rajaonarimampianina “Latsaka an-davaka ny firenena, manana adidy isika”
Niditra mivantana, nitondra hafatra ho an’ireo mpikatroka HVM ny Filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny sabotsy teo, nandritra ny fihaonana ao anatin’ny famelomam-maso ny antoko ny sabotsy teo tetsy Andraharo.
Fanapahan-kevitra mitanila Nokian-dRakotovao mafy ny Prefen’Antananarivo
Nampahatsiahy ny tantara momba ny fihetsiky ny Prefen’Antananarivo ankehitriny Jeneraly Jean Ravelonarivo izay izy ireo no nametraka azy tamin’ny fotoan’androny ny Mpandrindra Nasionalin’ny Antoko HVM ny sabotsy lasa teo.
Zaza varira nisy naka voamaso Nalefa ao amin’ny hopitalin’Ihosy
Nalefa ao amin'ny hopitaly Ihosy ilay zaza varira nisy naka voamaso tany Benato Toby, raha ny fampitam-baovaon’ny depiote voafidy tao Betroka, Nicolas Randrianasolo.
Fanehoan-kevitra an-dalam-be Tena mila fandinihana sy fanamboarana ny lalàna
Adihevitra tsy vita ny resaka fahalalahana maneho hevitra sy mamory olona, ary ny zo hidina an-dalambe eto Madagasikara. Nanamarika izany ny toe-draharaha roa samihafa ny faran’ny herinandro teo.
Resaka famoriam-bahoaka Manao politikan’ny kanosa ny mpitondra
Mitohy ny hetraketraka sy fihantsian’ady ataon’ny Fanjakana Rajoelina amin’i Marc Ravalomanana sy ny ekipany. Ny sabotsy teo, nanao fanambarana ny OMC (Organe Mixte de Conception) Atsimo Andrefana,
Sambava Nokorontanin’olona nasesi-javatra ireo skoto
Tamin'ny 11ora sy sasany alina no nisy nanozongozona ny tempolin'Andriamanitra FJKM tao Tsararivotra izay natorian'ireo Skoto Fjkm tamin’ny Sabotsy alina teo ka nisy nanakotaba no sady niantso mafy ny Pastora,
Vehivavy TIM Analamanga Nankalaza manokana ny tsingerin-taonan’i Dada
Nihaona sy nankalaza ny tsingerin-taona nahaterahan’ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo vehivavy TIM eto Analamanga ny sabotsy.
Marc Ravalomanana « Nohitsakitsahina tanteraka ny zoko »
Namoaka fanambarana i Marc Ravalomanana omaly 12 desambra takariva taorian’ny toe-javatra niseho tao Toliara.
Hopitaly Befelatanana Misy mitaraina ireo mpifidy fanafody maika
« Tena efa sao dia tsy rariny intsony ny ataon’ireto mpiasan’ny Hopitaly ato amin’ny CHUJRB (Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta Befelatanana)